Iza i Jesosy talohan'ny nahaterahany? , Fiangonan'Andriamanitra an'Andriamanitra Suisse (WKG)
Iza i Jesosy talohan'ny nahaterahany?
Nisy ve i Jesosy talohan'ny nahaterahany?
Iza na inona Jesosy talohan'ny nahatongavany ho olombelona? Andriamanitry ny Testamenta Taloha ve izy?
Mba hahafantarantsika hoe iza i Jesosy dia tsy maintsy fantarintsika aloha ny fampianarana fototra momba ny Andriamanitra telo izay iray. Mampianatra ny Baiboly fa iray Andriamanitra ary iray ihany. Izany dia milaza amintsika fa na iza na iza Jesosy talohan'ny nahatongavany ho olombelona, ​​dia tsy afaka ny ho Andriamanitra tafasaraka amin'ny Ray. Na dia olombelona iray aza Andriamanitra, efa nisy teto amin'ny olona mitovy telo sy mandrakizay izay fantatsika ho Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Mba hahatakarana ny fomba namaritan'ny fampianarana ny Andriamanitra telo izay iray ny toetran'Andriamanitra, dia tokony hotadidintsika ny tsy fitovian'ny teny sy ny olona. Ny fahasamihafana dia nolazaina toy izao: iray ihany ny an'Andriamanitra (izany hoe ny maha-izy azy), fa misy telo izay ao anatin'ny Iray iray, izany hoe: Andriamanitra telo, dia ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Ilay olona izay antsoina hoe Andriamanitra tokana dia manana fifandraisana mandrakizay ao anatiny ao amin'ny rainy sy ny zanany. Ny raim-pianakaviana foana no ray ary ny zanaka no zanaka. Ary mazava ho azy fa ny Fanahy Masina foana dia ny Fanahy Masina. Ny olona iray ao amin'ny andriamanitra dia tsy nialoha ny iray, ary ny iray tsy ambany noho ny natiora. Ny olona telo rehetra - ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina - mizara ny maha-iray an'Andriamanitra. Ny foto-pampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray dia manazava fa tsy noforonina velively i Jesosy isaky ny tonga olombelona, ​​fa Andriamanitra dia mandrakizay.
Noho izany, misy andry telo ny fahatakarana ny Trinité ny toetran'Andriamanitra. Voalohany, tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana tena ilay Jehovah (YHWH) ao amin'ny Testamenta Taloha na Theos of the New Testament - ilay namorona ny zavatra rehetra misy. Ny andry faharoa amin'ity fampianarana ity dia ahitana olona telo izay Andriamanitra, dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny ray tsy zanakalahy, ny zanaka dia tsy ny ray na ny Fanahy Masina, ary ny Fanahy Masina tsy ny ray na ny zanaka. Ny andry fahatelo dia milaza amintsika fa samy hafa ireo (telo fa tsy misaraka), fa mizara mizara iray ihany, Andriamanitra, ary izy ireo dia mandrakizay, mitovy ary mitovy toetra. Noho izany, iray ihany Andriamanitra ary iray ihany, kanefa misy olona telo. Tokony hitandrina foana isika mba tsy hahalala ny mpon'Andriamanitra ho olona ao amin'ny fanjakan'olombelona, ​​izay misy olona iray tafasaraka amin'ny iray hafa.
Tsiahivina fa misy zavatra hafa momba ny Andriamanitra telo izay iray tsy mihoatra ny fahatakaran’ny saintsika olombelona. Tsy manazava amintsika ny andinin-teny ny hoe azo atao ny Andriamanitra tokana izay misy. Manamarina fotsiny ihany ity raharaha ity. Ekena fa toa sarotra ho antsika ny mahatakatra ny maha-izy azy ny ray sy ny zanany. Noho izany, dia mila mitadidy ny tsy fitovian'ny olona sy ny maha-fampianaran'ny Andriamanitra ny Andriamanitra telo izay iray. Io fanavahana izany dia milaza amintsika fa tsy mitovy ny fomba itovizan'Andriamanitra ary ny fomba maha-telo azy. Raha tsorina dia Andriamanitra iray ihany ary telo ny olona. Raha mitadidy io fanavahana io isika mandritra ny fifanakalozan-dresaka, dia tsy hisafotofotofantsika ny fisian'ireo tsy fitovian-kevitra (fa tsy tena izy) ao anatin'ny fahamarinana ara-baiboly fa olona telo Andriamanitra - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina ,
Ny fitovian-toetra ara-batana, na dia tsy lavorary aza, dia mety hitarika antsika hahatakatra bebe kokoa. Iray ihany ny hazavana madio - ny mazava fotsy. Fa ny jiro fotsy dia azo atsipy ho loko telo lehibe - mena, maitso ary manga. Ny loko telo lehibe dia tsy misaraka amin'ny loko lehibe hafa - ampidirina ao anatin'ny hazavana iray, ny fotsy. Tsy misy afa-tsy hazavana tonga lafatra, izay antsoinay hoe hazavana fotsy, fa ny hazavana izany dia misy loko telo samihafa fa tsy manasaraka ny loko lehibe.
Ny fanazavana voalaza etsy ambony dia manome antsika ny fototry ny Andriamanitra telo izay iray, izay manome antsika ny fomba fijery hahatakatra hoe iza na i Jesosy talohan'ny naha-olombelona azy. Rehefa azontsika ny fifandraisana izay misy hatrany ao amin'Andriamanitra tokana, dia afaka mamaly ny valin'ny fanontaniana hoe iza i Jesosy talohan'ny nahatongavany ho olombelona sy ny fahaterahany ara-batana.
Ny toetran'i Jesosy sy ny fiainany mandrakizay ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona
Nohazavaina mazava ao amin'ny Jaona 1,1: 4-1,2 ny fisian'ny fisian'i Kristy. Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny dia ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no Teny. 1,3 Izy dia niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. 1,4 Ny zavatra rehetra dia mitovy ary tsy misy mitovy, tsy misy zavatra noforonina. 14 Fiainana no tao aminy…. Io teny na logo io amin'ny teny grika izay nanjary olona tao amin'i Jesosy. Andininy XNUMX: Ary ny Teny tonga nofo ary nonina teo amintsika ...
Ilay Teny maharitra sy tsy noforonina izay Andriamanitra, kanefa na dia iray amin'andriamanitra, dia niaraka tamin'Andriamanitra tonga olombelona. Marihina fa Andriamanitra dia Teny ary tonga olombelona. Ny teny tsy mbola nisy io, izany hoe tsy tonga ny teny. Teny foana na Andriamanitra foana izy. Ny fisian'ny teny dia tsy misy fiafarany. Efa nisy hatrizay.
Araka ny fanazavan'i Donald Mcleod ao amin'ny The person of Christ: nirahina ho toy ny olona iray izy, tsy izay tonga amin'ny alàlan'ny hirahina (p. 55). Nanohy i Mcleod: Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny fisiakan'i Jesosy dia fitohizan'ny fisiany taloha na talohan'izay ho lasa lanitra. Ny teny izay nonina teo amintsika dia mitovy amin'ny teny izay niaraka tamin'Andriamanitra. Ilay Kristy izay hita tamin'ny endrik'olombelona dia Ilay Ilay nisy taloha tahaka ny endrik'Andriamanitra (p. 63). Izy io no Teny na Zanak’Andriamanitra izay manaiky nofo, fa tsy ny Ray na ny Fanahy Masina.
Ao amin'ny Testamenta Taloha, ny anarana mahazatra indrindra an'Andriamanitra dia Jehovah, izay avy amin'ny teny hebreo hoe YHWH. Izy dia anarana nasionaly an'ny Isiraely ho an'Andriamanitra, ilay mpamorona mandrakizay sy misy tena. Rehefa mandeha ny fotoana dia hitan'ny Jiosy ny anarana hoe YHWH, izay masina loatra. Ny teny hebreo adonai (tompoko) na Adonai kosa no natao solony. Noho izany, ohatra, ao amin'ny Baiboly Loterana, ny teny hoe Lord (amin'ny litera kapital) dia ampiasaina na aiza na aiza YHWH ao amin'ny soratra Hebreo. I Jehovah no anarana fahita indrindra ho an'Andriamanitra hita ao amin'ny Testamenta Taloha - in-6800 mahery izy io no mifandraika aminy. Ny anarana iray hafa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Testamenta Taloha dia Elohim, izay ampiasaina mihoatra ny 2500, toy ny ao amin'ny andian-teny hoe Andriamanitra, Jehovah (YHWHElohim).
Misy andinin-teny maro ao amin'ny Testamenta Vaovao izay ilazan'ireo mpanoratra ny fanambarana izay ilazana an'i Jehovah ao amin'ny Testamenta Taloha. Io fomba fanaon'ireo mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao io dia fahita matetika ka mety tsy hitantsika ny maha-zava-dehibe azy. Amin'ny fametrahan'i Jehovah andinin-teny an'i Jesosy dia nanoratra ireo mpanoratra ireo fa i Jesosy na Andriamanitra tonga nofo. Mazava ho azy fa tsy tokony ho gaga isika raha ny fampitahana no manao an'io fampitahana io satria i Jesoa mihitsy no nanazava fa ny andalana ao amin'ny Testamenta Taloha dia manondro azy (Lk 24,25-27; 44-47; Jn 5,39-40; 45-46 ).
Jesosy no Eimi
Ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona, hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: Lazaiko aminareo alohan'ny hitranga, ka rehefa tonga ianareo dia mino fa Izaho (Jao 13,19:24). Io andian-teny io fa fandikana ny teny ego eimi grika aho. Io andian-teny io dia mitranga in-6,35 ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona. Fito, fara fahakeliny, ireo fanambarana ireo dia raisina ho manana ny maha-izy azy satria tsy manaraka ny fehezanteny toy ny ao amin'ny Jaona 8,24.28.58 Izaho no mofom-piainana. Amin'ireto tranga tsy misy farany ireto dia tsy misy fehezanteny ary ny tenako dia any amin'ny faran'ny fe-potoana. Midika izany fa nampiasa io fehezanteny io i Jesosy mba hanondroana azy. Ny isa telo dia Jaona 13,19:18,5.6, 8:XNUMX; XNUMX; XNUMX sy XNUMX.
Raha miverina amin'ny Isaia 41,4: 43,10; 46,4 sy 41,4 dia azontsika jerena ny fiavian'ny filazan'i Jesosy ny tenany hoe ego eimi (AKO) ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona. Ao amin'ny Isaia 43,10: 12 Andriamanitra na i Iaveh no miteny hoe: Izaho no Jehovah, ilay voalohany ary tsy miova amin'ny farany. Hoy ny ao amin'ny Isaia 46,4:XNUMX: Izaho: Izaho no Jehovah, ary rehefa afaka izany, dia voalaza hoe: Ianareo no vavolombeloko, hoy ny TOMPO, ary Izaho no Andriamanitra (and. XNUMX). Ao amin'ny Isaia XNUMX, Andriamanitra (Jehovah) dia manondro ny tenany ho Izaho ihany.
Ny andian-teny hebreo izaho dia ao amin'ny dikan-teny Grikan'ny Soratra Grika, ny Septuagint (izay ampiasain'ny Apostoly) ao amin'ny Isaia 41,4: 43,10; 46,4 sy 1,1.14 nadika tamin'ny fehezanteny ego eimi. Toa mazava fa i Jesosy dia nanao ny tenako ho fanondroana azy satria mifandray mivantana amin'ny tenin'i Jehovah (Jehovah) momba ny tenany ao amin'ny Isaia izy. Eny tokoa, hoy i Jaona dia nilaza fa Jesosy dia nilaza fa Andriamanitra ao amin'ny nofo (Jaona XNUMX, izay mampiditra ny filazantsara sy milaza ny maha-Andriamanitra sy ny maha-tonga nofo ny teny, dia manomana antsika ho amin'io zava-misy io).
Johannes 'ego eimi (I) i Jesosy dia azo jerena ao amin'ny Eksodosy 2, izay nahitan'Andriamanitra ny tenany ahy. Ao no vakiantsika ao: Andriamanitra [hebreo elohim] dia nilaza tamin'i Mosesy hoe: IZAHO IZAO IZAO IZAHAY [a. U. Izaho no Izy]. Ka nanao hoe: Izao no holazainao amin'ny zanak'Israely: 'Ho eo aho', fa Izy no naniraka ahy ho at you aminao. (V. 3). Hitanay fa ny Filazantsaran'i Jaona dia mampifandray mazava amin'i Jesosy sy Iaveh, anaran'Andriamanitra ao amin'ny Testamenta Taloha. Fa tokony hampahatsiahy koa isika fa tsy mampitaha an'i Jesosy amin'i Ray i Jaona (tahaka ny tsy mitory ny Filazantsara hafa). Ohatra, Jesosy dia mivavaka amin'ny Ray (Jn 14: 17,1-15). Fantatr'i Jaona fa hafa ny zanaka amin'ny ray - ary hitany koa dia samy hafa ny Fanahy Masina (Jaona 14,15.17.25:15,26, XNUMX:XNUMX; XNUMX:XNUMX). Noho izany antony izany dia ny fampahafantarana an'i Jesosy an'i Jesosy ho Andriamanitra na Yahweh (rehefa mieritreritra ny anarana hebreo tranainy ao amin'ny Testamenta Taloha) isika dia fanazavana telo amin'ny maha Andriamanitra azy.
Andeha hizaha azy indray satria zava-dehibe ilay izy. Namerimberin'i Jaona ny famantarana ny tenan'i Jesosy ho AK ao amin'ny Testamenta Taloha. Satria tsy misy afa-tsy Andriamanitra iray ihany ary fantatr'i Jaona izany, dia azontsika atao ny mamintina fa tsy maintsy misy olona roa mizara iray ho iray Andriamanitra (efa hitantsika fa Jesosy, Zanak'Andriamanitra, tsy mitovy amin'ny Ray). Miaraka amin'ny Fanahy Masina, noresahin'i Jaona ao amin'ny Toko 14-17, dia manana ny fototry ny Andriamanitra telo izay iray aho. Mba hialana amin'ny fisalasalana momba ny famantarana an'i Jaona momba an'i Jesosy amin'i Jehovah, dia afaka mitanisa ny Jaona 12,37: 41-XNUMX isika, izay milaza hoe:
Ary na dia nanao famantarana toy izany teo imasony aza izy ireo, dia tsy nino azy, 12,38 ny tenin'i Isaia mpaminany izay nolazainy hoe: «Tompo ô, iza no mino ny fitoriantsika? Ary iza no nambaran'ny sandrin'ny Tompo? » 12,39 Ary noho izany dia tsy nino izy ireo, satria hoy i Isaia indray: «12,40 Nohajamba ny masony izy ireo ary nanamafy ny fony, mba tsy ahiratan'ny maso sy hahalala ary hiova fo amin'ny fo, ary manampy azy ireo aho. . " 12,41:53,1 Izany no nolazain'i Isaia, satria nahita ny voninahiny izy ka niresaka momba azy. Ny andinin-teny etsy ambony izay nampiasain'i Jaona dia avy amin'ny Isaia 6,10: XNUMX sy XNUMX: XNUMX. Tany am-boalohany no nolazain'ilay Mpaminany ireo teny ireo momba an'i Jehovah. Nilaza i Jaona fa ny tena hitan'i Isaia dia voninahitr'i Jesôsy ary ny momba azy. Ary ho an'ny apostoly Jaona, Jesosy dia Jehovah amin'ny nofo; talohan'ny nahaterahany dia nantsoina hoe Jehovah izy.
Jesosy dia Tompon'ny Testamenta Vaovao
Nanomboka ny filazantsarany i Marka tamin'ny alàlan'ny filazany fa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy "Zanak'Andriamanitra" (Mk 1,1) Avy eo dia nalaina avy tao amin'ny Malakia 3,1 sy Isaia 40,3 ireto teny manaraka ireto: Araka ny voasoratra ao amin'Isaia mpaminany: "indro, Izaho maniraka ny irako hialoha lalana anao hanomana ny lalanao." "1,3 Feo ny mpitory teny any an-efitra: amboary ny làlan'ny Tompo, miakara!" Mazava ho azy fa ny Tompo ao amin'ny Isaia 40,3 dia Jehovah, ilay Andriamanitry ny Isiraely izay efa misy.
Araka ny voalaza etsy ambony dia nanonona ny ampahany voalohany amin'ny Malakia 3,1 i Mark: indro, te handefa ny irako aho hanomana ny lalana ho ahy (ilay mpitory dia Jaona Mpanao Batisa). Ny fehezanteny manaraka ao amin'ny Malakia dia: Ary tsy ho ela izahay dia ho tonga any amin'ny tempoliny izay tadiavinay ny Tompo; ary ny anjelin'ny fanekena izay tadiavinao, indro, ho avy izy. Jehovah tokoa i Jehovah. Ny fitanisany ny ampahany voalohany tamin'io andininy io dia nanondro i Marka fa Jesosy dia ny fahatanterahan'ny tenin'i Malakia momba an'i Jehovah. Marka milaza ny filazantsara, izany hoe i Iaveh Tompo dia tonga amin'ny maha-mpitondra hafatra ny fanekena azy. Fa hoy i Marka: Iaveh no Tompo.
Avy amin'ny Romana 10,9: 10-13 dia takatsika fa ny Kristiana dia manaiky fa Jesosy dia Tompo. Ny toe-javatra manodidina ny andininy 2,32 dia mampiseho mazava fa i Jesosy no Tompo, izay tokony antsoin'ny olona rehetra mba hovonjena. I Paoly dia nanonona an'i Joela 13 mba hanamafisana an'io hevitra io: Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo dia tokony hovonjena (and. 2,32). Raha mamaky ny Joela XNUMX:XNUMX ianao dia afaka mahita fa i Jesosy nanonona io andininy io. Fa ny voalazan'ny Testamenta Taloha kosa milaza fa ny famonjena dia tonga amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jehovah - ny anaran'Andriamanitra. Ho an'i Paoly, mazava ho azy dia i Jesosy izay antsointsika ho voavonjy.
Ao amin'ny Filipiana 2,9: 11-43,23 dia mamaky isika fa manana anarana iray ambonin'ireo anarana rehetra i Jesoa, fa amin'ny anarany dia tokony handohalika ny lohalika rehetra, ary hanaiky ny lela rehetra fa i Jesosy Kristy dia Tompo. Niorina tamin'ity Isaia XNUMX:XNUMX ity i Paoly, izay hitantsika manaraka ireto: Nianiana tamin'ny tenako aho ary avy tamin'ny vavako ny fahamarinana, teny tokony hitoetra: tokony handohalika sy hianiana ny fiteny rehetra ary lazao: Manana fahamarinana sy tanjaka ao amin'ny Tompo aho. Ao anatin'ny toe-javatra misy ny Testamenta Taloha, dia izany no Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely izay miresaka ny tenany. Izy no Tompo izay miteny hoe: Raha tsy izany dia tsy misy andriamanitra afa-tsy Izaho.
Saingy tsy nisalasala i Paoly nilaza fa mandohalika amin'i Jesosy ny lohalika rehetra ary hanaiky azy ny lela rehetra. Satria mino an'Andriamanitra tokana i Paoly, dia tsy maintsy mitovitovy amin'i Jesosy amin'i Jesosy izy. Mety hisy ny hanontany hoe: raha i Jesoa ve i Jehovah, taiza ny ray tao amin'ny Testamenta Taloha? Ny tena atahorana dia, araka ny fahatakaran'ny Trinité antsika, ny ray sy ny zanany dia Andriamanitra Jehovah satria andriamanitra (toa ny Fanahy Masina). Ny olona telo rehetra ao amin'ny Andriamanitra - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina - mizara toetra tokana iray sy anarana masina iray, izay antsoina hoe Andriamanitra, theos na Jehovah.
Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia mampifandray an'i Jesosy amin'ny Tompo
Iray amin'ireo fanambarana mazava indrindra nifandraisan'i Jesosy tamin'i Jehovah, ilay Andriamanitry ny Testamenta Taloha, ny Hebreo 1, indrindra fa ny andininy 8-12. Ny andininy vitsivitsy voalohany ao amin'ny Toko 1 dia mampiseho mazava fa i Jesosy Kristy, amin'ny maha Zanak'Andriamanitra azy, no lohahevitra (and. 2). Nahary an'izao tontolo izao [izao tontolo izao] tamin'ny alalàn'ny Zanany ary nanendry azy ho mpandova ny zavatra rehetra (and. 2). Ny zanakalahy dia taratry ny voninahiny sy ny endrik'ny toetrany (and. 3). Entiny amin'ny teny matanjaka ny zavatra rehetra (and. 3).
Avy eo mamaky ny manaraka ny andininy 8-12 izahay:
Fa izao dia avy amin'ny zanaka: "Andriamanitra, ny seza fiandriananao mandrakizay doria, ary ny tehim-pahamarinana dia tehim-panjakan'ny fanjakanao. 1,9 Tianao ny fahamarinana ary halanao ny tsy rariny; koa Andriamanitra ô, nanosotra menaka fifaliana toa anao ny Andriamanitrao. » 1,10:1,11 Ary: «Ianao, ry Tompo, dia nanorina ny tany tamin'ny voalohany, ary ny lanitra dia asan'ny tananao. 1,12:1 Ireo dia hiala, fa ianao kosa mitoetra. Samy ho lany andro toy ny akanjo ihany izy rehetra; 102,5 Ary hampiakarinao toy ny lamba izy, ka hovana toy ny akanjo. Nefa ianao no mitovy ary tsy hifarana ny taonanao. Voalohany, tokony ho marihintsika fa ny fitaovana ao amin'ny hebreo 7 dia avy amin'ny salamo maromaro. Ny andalana faharoa amin'ny fifidianana dia voatonona ao amin'ny Salamo 102: XNUMX-XNUMX. Ity andalana ao amin'ny Salamo ity dia fanondroana mazava an'i Jehovah, Andriamanitry ny Testamenta Taloha, Mpamorona ny zava-drehetra. Momba an'i Jehovah tokoa ny Salamo faha-XNUMX. Fa ny taratasy ho an'ny Hebreo dia mampihatra an'io tenin'i Jesosy io. Iray ihany no mety ho fehiny: Jesosy dia Andriamanitra na Jehovah.
Mariho ireo teny ao amin'ny italika etsy ambony. Izy ireo dia mampiseho fa ny Zanaka, Jesosy Kristy, dia antsoina hoe Andriamanitra sy Tompo ao amin'ny Hebreo 1. Hitanay koa fa ny fifandraisan'i Jehovah amin'ilay niresaka taminy dia Andriamanitra ô, Andriamanitrao. Ka na addressee na addressee dia Andriamanitra. Ahoana no ahavitana raha tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana? Mazava ho azy ny valiny ao amin'ny fanambarana nataontsika Trinitera. Ny ray dia Andriamanitra ary ny zanaka dia Andriamanitra koa. Iray amin'ireo olona telo izy ireo dia Andriamanitra, na Jehovah amin'ny fiteny hebreo.
Ny Hebreo 1 dia maneho an'i Jesosy ho mpamorona sy mpanohana izao rehetra izao. Mijanona ho mitovy ihany izy (and. 12), na tsotra, izany hoe mandrakizay ny toetrany. Jesosy dia mitovy endrika amin'ny toetran'ny Andriamanitra (and. 3). Noho izany dia tsy maintsy ho Andriamanitra ihany koa izy. Tsy mahagaga raha ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia afaka mizara fizarana izay nasain'i Andriamanitra (Jehovah) sy nifandraisany tamin'i Jesosy. James White, ao amin'ny The Trinite manadino ao amin'ny pejy 133-134, dia mametraka izany toy izao:
Ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny hebreo dia tsy mampiseho fanakantsakanana amin'ny alàlan'ny alalàn'ny salamo izany - andalana iray izay mety hamaritana ilay Andriamanitra Mpamorona mandrakizay - ary manondro an'i Jesosy Kristy ... Inona no dikan'ny hoe ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia misy iray Afaka maka andalan-tsoratra izay azo ampiharina afa-tsy amin'i Jehovah ihany ary avy eo mifandraika amin'ny Zanak'Andriamanitra, Jesosy Kristy? Midika izany fa tsy nahita olana ny hamantarana izany satria nino izy ireo fa ny zanak'io dia tena olombelona i Jehovah.
Ny nandanian'i Jesosy tao amin'ny asa soratr'i Petera
Andao hojerentsika ny ohatra iray hafa amin'ny fomba ampitovan'ny soratra masin'ny Testamenta Vaovao an'i Jesosy sy i Jehovah, ilay Tompo na Andriamanitry ny Testamenta Taloha. Nomen'ny apostoly Petera an'i Jesosy, ilay vato velona izay nolavin'ny olona, ​​fa voafidin'Andriamanitra sy sarobidy aminy (1 Pet 2,4: XNUMX). Mba hampisehoana fa i Jesoa ity no vato velona, ​​nanonona ireto fizarana telo manaraka ireto avy amin'ny Soratra Masina izy:
«Indro, mametraka vato fehizoro voafidy ao Ziona aho; ary izay rehetra mino azy dia tsy ho menatra. » 2,7 Ho anao izay mino, dia sarobidy izany; ho an'ny tsy mpino anefa, "ny vato nolavin'ny mpanao trano ary tonga vato zorony 2,8 dia vatolampy fifandirana sy vatolampy fahasosorana"; miondrika any aminy izy ireo satria tsy mino ny teny, izay no dikan'izy ireo (1 Pet 2,6-8).
Avy ao amin'ny Isaia 28,16:118,22, Salamo 8,14: 8,14 ary ny Isaia 8,14:8,13 no tondroina. Amin'ny toe-javatra rehetra, ireo teny ireo dia manondro ny Tompo, na Yahweh, ao amin'ny tontolon'ny Testamenta Taloha. Ohatra, ao amin'ny Isaia 14:XNUMX, dia hoy i Jehovah: Fa mikomy amin'i Jehovah, Tompon'ny maro; aoka ho tahotra sy horohoro ho anao izany. XNUMX Ho fandrika sy fahatafintohinana ary vatolampy manelingelina ny fianakavian'i Israely roa izy, fantsakana sy zoro ho an'ny mponin'i Jerosalema (Is XNUMX: XNUMX-XNUMX).
Ho an'i Peter, ho an'ny mpanoratra hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao, i Jesosy dia hampitahaina amin'ny Tompon'ny Testamenta Taloha - Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely. Ny apostoly Paoly koa dia nanonona ny Isaia 8,32:33 ao amin'ny Romana 8,14: XNUMX-XNUMX mba hampisehoana fa i Jesosy no vato mahatafintohina izay nianjain'ny jiosy tsy nampino.
Ho an'ireo mpanoratra ny Testamenta Vaovao, Jehovah, ilay vatolampin'Israely, dia tonga olona ao amin'i Jesosy, vatolampan'ny Fiangonana. Araka ny nolazain'i Paoly momba an'Andriamanitry ny Isiraely: Ary samy nihinana sakafo ara-panahy iray ihany ry zareo, ary samy nisotro ny fisotro ara-panahy iray ihany izy rehetra; fa nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izay nanaraka azy izy ireo; fa ny vatolampy dia Kristy.